XO-202 magetsi akamira wiricheya - Simba Wiricheya - Powerchair
×	 LT-K5 - 28 lbs	1 × $419.00
musha / chitoro / Chinyorwa Wiricheya / Kumira Wiricheya XO Series
View ngoro "LT-K5 - 28 lbs" yakawedzerwa kungoro yako.
XO-202 Simba Rakamira Wiricheya
Iyo Karman XO-202 Simba Wiricheya neStand-Up Wiricheya ficha inopa akawanda mabhenefiti ehutano akange asingawanikwe kune avo vari muwiricheya. Nekuisa muviri munzvimbo yakamira, chigaro chinopa vashandisi kutenderera kweropa kuri nani, itsvo uye kushanda kwedundira, pamwe nehunyoro hwemhasuru. YAKADZIDZISWA NENYENZO 4.6 PASI WHEELCHAIR INSTITUTE
The Karman XO-202 Magetsi Akamira Wiricheya iri pamusoro pemutsara, ichitema mawiricheya emagetsi wheelchair anogona kuzviita zvese, zvinopihwa nengano muindastiri. Yakakurudzirwa kune chero munhu anoda yakazara-inoratidzirwa yemagetsi wheelchair iyo zvakare inopa kusimuka-kugona… chero iwe uchikwanisa kuitenga. Iwe unotambura nenyaya yekufamba yakakomba zvakakwana zvekuti unoda rubatsiro kusimuka? Wanga uchitsvaga yakasimba, izere-inoratidzirwa wheelchair yemagetsi inogona kuita zvese, kusanganisira kukupa iwe automatedaid kuti uwane tsoka dzako pasi pako?
Kana iwe ukapindura hongu kune mumwe wemibvunzo iyoyo, saka urikuda kwedu kuongororwa kwakadzama kweKarman XO-202 wiricheya. Ichi chinhu chakanakisa chekufambisa chinokwanisa kuzviita zvese. Iyo yekucheka-kumucheto tekinoroji yakatora kukudzwa kwepamusoro mune yedu yazvino roundup ongororo yeakanakisa mawiricheya evakuru.
Izvo hazvisi zvachose kana iyo Karman XO-202 wheelchair ine chekuita. Zvakanaka zvinhu zvese zvinogadziriswa. Sezvambotaurwa pamusoro apa, unogona kuraira chigaro nechimwe chezvitatu zvakasiyana pakadzika zvigaro uye maviri akasarudzika zvigaro zvehupamhi zvigaro.
Kunyaradza-kuchenjera, iwe zvakare uchawana zvakawanda zvekuda. Iyo Karman XO-202 Yakamira Wiricheya inopa zvinoshamisa kusununguka ndangariro furo padding mune zvese chigaro uye chigaro kumashure. Vashoma mavhiripu aregenuinelycomfy yekugara kwenguva refu, asi ichi ndicho chimwe chazvo. Haisi chigaro chakakura chekurara, uye ichiri chisina kugadzikana senge yakaremerwa recliner, asi iwe unenge usina kana dambudziko kugara mukati maro kwezuva rakawanda kana uchida.
Sarudza chisarudzo ... 16 " 18 "
Shamwari Anodzora *
Kumashure kwakakwidzwa joystick yekushandisa shamwari. Inotonga ese mashandiro echigadzirwa. Kusanganisira kumira, kutyaira, uye kugara.
Sarudza chisarudzo ... Hongu (+ $ 1,500.00)	Aihwa
Kwete Slip Surface yeiyo Footplate (+$90.00)
Takura homwe - Saizi: Diki (+$11.00)
SKU: XO-202 Categories: Wiricheya yemagetsi, Simba Mawiricheya, Kumira Wiricheya Tags: wheelchair isina mwero, wiricheya, mavhiripu
Mukuwedzera kugona kuisa wiricheya-vanhu vakasungwa munzvimbo yakamira vanoderedza contract contract uye bone decalcification, nokudaro vachideredza njodzi ye osteoporosis. Sachigaro ane zvigaro zvekusununguka uye kumashure kwejelasi pamakusheni, pamwe nehurefu uye nekona inogadziriswa tsoka dzetsoka. Sachigaro anomhanyisa mabhatiri e2 (12V), uye ane 25 mamaira renji, uye zvigaro zvemaoko zviri kutenderera, concave, uye zvinoratidza mutungamiriri kurudyi.
Muenzaniso: XO-202 Simuka wiricheya
Flip-kumashure Concave Armrests w / SHARK II
Nyowani nyowani kuvhurwa naLloyd Actuator / mota, Zvita 2010 yakamisa Denmark Linak Motor
Adjustable Footrest Kureba & Angle
2-3 ” Memory Foam Cushion Back uye Seat
Inofema Nylon Upholstery
Mota: DC24V. 320W
8 ”Pamberi Flat Yemahara Caster
14, Kumashure Flat Mahara Kumashure Mavhiri
Nyore Kushandisa Remote YeDrive & Mira
Knee Tsigiro, Chengetedzo Bhandi, Chest Rutsigiro & Gumbo Bhandi
Kurema Chete: 110 lbs. w / o Bhatiri
Flat Mahara Kumashure Mavhiri & Kumberi mavhiri
Yekumhanyisa Speed: 5 Mph (Kufamba zvishoma kunokurudzirwa wakamira)
Bhatiri: 12V / 36AH x 2pcs
Chigaro Kudzika 18 padiki., 19 padiki., 20 padiki.
Chigaro Kureba 25 inch.
Kunopindirana Kureba 40 inch. (30 inch kana kumashure yakapetwa)
Akazara murefu 25 padiki., 26 1/2 padiki.
Overall Length 42 padiki.
Kutumira Kukura 48 x 40 x 31 (260 lbs kuburikidza neLTL)
XO-202 kumira simba wiricheya UPC #